မှန်ကန်သော DAM သည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် | Martech Zone
အကြောင်းအရာကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စုစည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းချက်များစွာရှိပါသည်—အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို စဉ်းစားပါ (CMS) သို့မဟုတ် ဖိုင်လက်ခံဝန်ဆောင်မှုများ (Dropbox ကဲ့သို့)။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) ဤဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားများနှင့် ယှဉ်တွဲလုပ်ဆောင်သည်—သို့သော် အကြောင်းအရာအတွက် ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။
Box၊ Dropbox၊ Google Drive၊ Sharepoint စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်စရာများ..၊ နောက်ဆုံးအဆင့်အတွက် ရိုးရှင်းသော ကားပါကင်နေရာများအဖြစ် အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အဆုံး-ပြည်နယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ; ၎င်းတို့သည် အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖန်တီးခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အထက်စီးကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို မပံ့ပိုးပါ။
အရ DAM နှင့် CMS - ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည့် သီးခြားစနစ်များဖြစ်သည်။ CMS သည် သင့်ဝဘ်ဆိုက်အတွက် အကြောင်းအရာများနှင့် ဘလော့ဂ်များ၊ ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများနှင့် မိုက်ခရိုဆိုက်များကဲ့သို့သော အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဂုဏ်သတ္တိများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကူညီပေးသော်လည်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် DAM သည် အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပေးပို့မှုအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ချန်နယ်များ။ DAMs သည် ဗီဒီယို၊ 3D၊ အော်ဒီယိုနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဖောက်သည်ခရီးတစ်လျှောက်လုံး သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အကြောင်းအရာအားလုံး၏အမှန်တရားအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
1. Modular Content Strategies များကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် DAM ကို သင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
DAM သည် သင်၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောသိုလှောင်မှုအဖြစ်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စျေးကွက်များ၊ နယ်မြေများ၊ ချန်နယ်များနှင့် အခြားအရာများတစ်လျှောက် အကြောင်းအရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောနှောခြင်းနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအပါအဝင် သင့်အကြောင်းအရာကို ပြီးပြည့်စုံသော ထိန်းချုပ်မှုကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာကို သေးငယ်သော၊ ပြန်သုံးနိုင်သော မော်ဂျူလာအကြောင်းအရာအဖြစ် ခွဲခြမ်းခြင်းဖြင့် - အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အစုံလိုက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများအဖြစ် - အဖွဲ့များအား ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော အကြောင်းအရာများကို မည်သည့်ချန်နယ်များတွင်မဆို အမြန်ပေးပို့ရန် အတည်ပြုထားသောအကြောင်းအရာကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို ပေးသည်။ တွင်ရှိကြသည်။
a ကိုသုံးနေစဉ် modular အကြောင်းအရာဗျူဟာ DAM တစ်ခုအတွင်းရှိ အကြောင်းအရာအရာဝတ္တုများ၏ အရေအတွက်ကို မလွဲမသွေ တိုးလာလိမ့်မည်၊ မက်တာဒေတာ အမွေဆက်ခံခြင်းကဲ့သို့သော မက်တာဒေတာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ရှိသည်၊ ရိုးရှင်းစေပြီး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအချို့ကို အလိုအလျောက်ဖြစ်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် မက်တာဒေတာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်မှာ DAM သည် စွန့်စားမှုနှင့် လိုက်နာမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် မော်ဂျူလာအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ ဥပမာ၊ မည်ကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများ၊ အကြောင်းအရာအချို့ကို ပရိသတ်များ၊ ချန်နယ်များ သို့မဟုတ် ဒေသများအတွက် အသုံးပြုသင့် သို့မဟုတ် မသုံးသင့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ DAM တစ်ခုအတွင်း modular အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားခြင်းရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ အကြောင်းအရာကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုပြီး ပြန်သုံးလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အား အကြောင်းအရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှု၊ အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက် မည်သည့်အကြောင်းအရာက အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ အကယ်၍၊ အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အငြိမ်းစားယူရန် လိုအပ်ပြီး အခြားအရာများစွာရှိသည်။
2. DAM သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို မည်သို့ဖွင့်မည်နည်း။
ယနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်၊ အကြောင်းအရာသည် အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် စကားပြောဆိုမှုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံ၍ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ- ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းစွာသိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သို့ခံစားရစေသည်၊ ၎င်းနှင့် ဆက်ဆံသည့်အခါ မည်မျှ တသမတ်တည်းဖြစ်သနည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့် မည်မျှအဆင်ပြေပြေနှင့် ဆီလျော်မှုရှိသနည်း။
သို့သော် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကို ပေးအပ်ခြင်းသည် မလွယ်ကူသည့်အပြင် အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များနှင့် အချိန်များကို ယူနိုင်သည်။ Aprimo ကဲ့သို့ အုတ်မြစ်ချသော စနစ်တစ်ခု ရောက်ရှိလာပါသည်။
ထိရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ထိရောက်သောဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှုနှင့် အတိုင်းအတာအလိုက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အကြောင်းအရာဗျူဟာဖြင့် စတင်ပါသည်။ Aprimo သည် သင်၏ အကြောင်းအရာ လည်ပတ်မှု တစ်ခုလုံး၏ ကျောရိုးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်၊ အကြောင်းအရာ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုစီနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော တစ်သီးပုဂ္ဂလ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲ စီမံရုံသာမက၊ ဖန်တီးမှု နှင့် အကြောင်းအရာ အဖွဲ့များသည် ဖန်တီးမှု၊ ရှာဖွေ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် မော်ဂျူလာ အကြောင်းအရာ ကဲ့သို့သော နည်းဗျူဟာများကိုပါ လုပ်ဆောင်ပေးသည် ။ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပိုမိုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာများကို မျှဝေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။
Aprimo ၏ Smart Content Personalization အင်္ဂါရပ်သည် သင့်အား မှန်ကန်သော၊ ပစ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အကြောင်းအရာကို ကိုက်ညီနိုင်သည့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအင်ဂျင်များထံ မက်တာဒေတာဖြည့်ထားသော တဂ်များကို အလိုအလျောက်ပေးပို့နိုင်စေပါသည်။ Salesforce နှင့် Aprimo ချိတ်ဆက်မှုများမှတဆင့်၊ သင်သည် ချန်နယ်များတစ်လျှောက်တွင် သင့်ဖောက်သည်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန်၊ အကြောင်းအရာရှိရန်နှင့် သင့်ဖောက်သည်သည် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မောင်းနှင်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ နှင့်အသွင်တူ တိုကင် အတွင်း အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံများ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖောက်သည် အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက် ကဲ့သို့သော ဖောက်သည် သီးသန့် အချက်အလက်များကိုပင် အလိုအလျောက် ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။
3. Airtight လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် DAM ကို သင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ကုမ္ပဏီတွေက ဖန်တီးတယ်။ အများကြီး အကြောင်းအရာနှင့် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ DAM မရှိဘဲ၊ အကြောင်းအရာနှင့် အလုပ်အသွားအလာများကို မတူညီသော ဌာနများနှင့် ကိရိယာများတွင် မကြာခဏ ပိတ်ဆို့ထားကာ မလိုအပ်သော ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အန္တရာယ်များကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ကြီးမားသော ဒဏ်ငွေများဆောင်နိုင်စေမည့် အန္တရာယ်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအချက်များကို ရိုးရှင်းစေခြင်းသည် အချိန်နှင့်ငွေကို သက်သာစေပြီး စျေးကွက်သို့ အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်သည်။
အခြေခံများအားလုံးကို အကျုံးဝင်စေရန်၊ အထူးသဖြင့် အလွန်ထိန်းချုပ်ပြီး အထူးပြုစက်မှုလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသူများအတွက် ဘဝသိပ္ပံ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းသုံးသပ်ချက်များနှင့် ထုတ်ဖော်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထောက်အထားတင်ပြခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန် နှစ်ခုစလုံးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော အမှန်တရားအရင်းအမြစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်၏အကြောင်းအရာသည် ၎င်းကို ခြေရာခံ၊ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ သုံးသပ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားသည်နှင့်အမျှ ကောင်းမွန်ပါသည်။
Aprimo နှင့် ပါဝါပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လိုက်နာမှုဖြေရှင်းချက်နည်းပညာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို တုံ့ပြန်ရန်၊ ငွေကုန်ကြေးကျများသော ဒဏ်ကြေးများအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သတင်းကို ကာကွယ်ရန်—ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ပေးဆောင်နေစဥ်အချိန်တိုင်းတွင် လိုအပ်သော အကြောင်းအရာများ၏ မျဉ်းကြောင်းမှ ခြေရာခံနိုင်မှုကို ပြီးပြည့်စုံသော၊ အဆုံးမှ အဆုံးအထိ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပေးပို့နိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံနှင့် စျေးကွက်သို့ အချိန်ကို လျှော့ချပါ။
4. DAM သည် ဘာသာစကားများနှင့် ဒေသများတစ်လျှောက် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ညီညွတ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီပေးသနည်း။
အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ရှိ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာကို မှန်ကန်သောစားသုံးသူနှင့် မျှဝေကြောင်း သေချာစေရန်လိုအပ်သည် – ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု – အပြုသဘောဆောင်သောအမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံ.
ဆိုလိုသည်မှာ၊ အထူးသဖြင့် မတူညီသောဘာသာစကားနှင့် ဒေသများတစ်လျှောက် အကြောင်းအရာများကို ကမ်ပိန်းနှင့် ချန်နယ်တစ်ခုစီတွင် မှန်ကန်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာစေရန် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တယ်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံများကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းနည်းများသည် အသုံးဝင်လာပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် အသင်းတွင်းနှင့် ပြင်ပ (အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်များဟု ထင်မြင်ယူဆသူများ) အားလုံးကို ခွင့်ပြုပြီး နောက်ဆုံးပေါ် စာတိုပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လိုဂိုများ၊ ဖောင့်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြားအရာများအားလုံးကို သင့် DAM ရှိ တိုက်ရိုက်လင့်ခ်များဖြင့် အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။ ချန်နယ်များ၊ ဒေသများနှင့် ဘာသာစကားများ။ ဆိုလိုသည်မှာ အမေရိကန် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည် တီထွင်ဖန်တီးမှု ပံ့ပိုးမှု မလိုအပ်ဘဲ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြင်ဆင်ပြီး UK စျေးကွက်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် US တွင် အလွန်အောင်မြင်သော အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါက၊ ဒေသတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ယခု အလားတူကမ်ပိန်ကို လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။ သင်၏ DAM ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ နမူနာများ၊ အကြောင်းအရာ၊ ဒီဇိုင်း၊ လိုဂို၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားအရာများကို အတည်မပြု၊ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် အပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ကြောင်း သိထားခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ကမ်ပိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အဆိုပါအဖွဲ့များထံ ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။
5. DAM သည် သင်၏ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များကို မည်သို့ကူညီပေးမည်နည်း။
သင်၏ DAM သည် မတူညီသော စျေးကွက်များတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို ကူညီပေးရုံသာမက သင်၏ ဖန်တီးမှုနှင့် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များကို အချိန်ပြန်ပေးခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးမြင့်ပရောဂျက်များကို အာရုံစိုက်ရန် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်ရှားရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
DAM ဖြင့်၊ ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များသည် အလုံးစုံအတည်ပြုထားသော၊ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ရှိ၊ နှင့်ကိုက်ညီသော မော်ဂျူလာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဒစ်ဂျစ်တိုက်တစ်ခုလုံးနှင့်အတူ အကြောင်းအရာများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဖန်တီးနိုင်၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောစျေးကွက်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အကြောင်းအရာကို ဒေသစံသတ်မှတ်ရန် ဖန်တီးမှုမဟုတ်သောအသုံးပြုသူများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ Aprimo ကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသည် ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် အတည်ပြုချက်များကို ချောမွေ့စေရန် AI-မောင်းနှင်သည့် အလိုအလျောက်စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်နှင့် အချိန်များကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်စေရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အားလုံး၏ ရလဒ်မှာ အမှန်တရား၏ရင်းမြစ်တစ်ခု၊ လည်ပတ်ချိန်တိုတိုနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မြင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဌာနတစ်ခုနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်ပြန်လာ (သမင်ဒရယ်) သုံးစွဲသူများ မျှော်လင့်ထားသည့် စိတ်ကြိုက်ဒစ်ဂျစ်တယ် အတွေ့အကြုံများကို ပေးအပ်သည့်အခါ ပိုမိုအသိဥာဏ်ရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်။
6. အေဂျင်စီများ၊ ချန်နယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ နှင့် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်သူများ အတွက် သင့် DAM ကို သတ်မှတ်ပုံ
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဆိတ်ကွယ်နေသော အကြောင်းအရာ သိုလှောင်ရာနေရာများနှင့် မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများတစ်လျှောက် အလုပ်အသွားအလာများအစား၊ Aprimo သည် ဖန်တီးမှုနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသည် ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အထိ—အားလုံးသည် တစ်နေရာတည်းတွင် ပါဝင်သည့် ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းသည် သင့်အကြောင်းအရာ၏ ထိန်းသိမ်းမှုကို ရိုးရှင်းစေပြီး အကြောင်းအရာကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ၊ အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းရန် ခွင့်ပြုကာ တူညီသောပိုင်ဆိုင်မှု၏ ထပ်နေမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အဖွဲ့အစည်းပြင်ပတွင် အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင်ပင် Dropbox နှင့် Google Drive မရှိတော့ပါ။ DAM ဖြင့် သင်သည် ပြင်ပအေဂျင်စီများနှင့် ဖြန့်ဖြူးသူများအား ၎င်းတို့လိုအပ်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ ထိန်းချုပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးကာ အကြောင်းအရာကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့် အခြားတစ်ခုမှ အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော အကြောင်းအရာအသစ်များကိုပင် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
တူသောအင်္ဂါရပ်များ အများသူငှာ အကြောင်းအရာ ပေးပို့ခြင်း ကွန်ရက် (CDN) လင့်ခ်များသည် သင့်အကြောင်းအရာ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုသာ အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာစေရုံသာမကဘဲ သင့် CMS တွင် အသုံးပြုနေသည့် နေရာတိုင်းတွင် ကဲ့သို့ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုဗားရှင်းများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မတူညီသော ဒေါင်းလုဒ်ရွေးချယ်မှုများနှင့် မတူညီသောလူမှုရေးချန်နယ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များဖြင့် အေဂျင်စီများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်ချက်များ၊ နမူနာပုံစံများနှင့် အတည်ပြုထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ညီညွတ်မှုကို အလွယ်တကူ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
7. မှန်ကန်သော DAM သည် CMS-Agnostic Content Operations ကို မည်သို့ဖွင့်မည်နည်း။
DAM အားလုံးကို တန်းတူဖန်တီးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ DAM ကို ပေးဆောင်သည့် CMS ပလပ်ဖောင်းများ ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် မကြာသေးမီက ဝယ်ယူမှုမှ bolt-on ဖြေရှင်းချက်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပလပ်ဖောင်း DAM များသည် နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ရိုးရှင်းသောသိုလှောင်ရာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြပြီး ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေသော ရောနှောဂေဟစနစ်အတွင်း ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော ပါဝါ၊ သွက်လက်မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များကို မပေးဆောင်ပါ။
ယနေ့ရှုပ်ထွေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ omnichannel stack တစ်ခုလုံးအတွက် ရောင်းချသူတစ်ဦးတည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်၊ DAM တစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ သင်သည် CMS-agnostic ဖြစ်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ရှာဖွေသင့်ပြီး သင့်၏ universal content engine အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သော downstream solutions အများအပြားကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မျိုးရိုးအကောင်းဆုံး DAM ဖြင့်၊ တိုးချဲ့နိုင်သောနှင့် ပွင့်လင်းသောပေါင်းစည်းမှုမှတစ်ဆင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ချန်နယ်အသစ်များအဖြစ် ကြီးထွားစေရန် လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို အနာဂတ်သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ DAM သည် မည်သည့် CMS၊ CMS အများအပြားကို မျဉ်းပြိုင်နှင့်မဆို ချန်နယ်အမျိုးအစားနှင့် ဂေဟစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွင်း omnichannel လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရပါမည်။ သင်၏ CMS တွင် သင်ပြုလုပ်သော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကင်းလွတ်သော universal content engine ဖြစ်လာပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး "စကားပြော" လေ့ရှိသည့် ကန့်သတ်ကိရိယာအစုံအလင်ကို အားကိုးမည့်အစား၊ Composable Content Architecture ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော အမှီအခိုကင်းသော DAM သည် မတူကွဲပြားသော ဂေဟစနစ်အတွင်း လွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေသောကြောင့် စျေးကွက်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းဆီသို့ အချိန်ကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည် နှင့် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရှေ့သို့ ရွေ့လျားစေသည့်နည်းလမ်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။
အခမဲ့ Aprimo DAM စမ်းသပ်မှု
Tags: aiaprimoဉာဏ်ရည်တုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအသံသေတ္တာအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်လိုက်နာမှုအမှတ်တံဆိပ်အသုံးအနှုန်းများCDNCMScms-ဘာသာမဲ့လိုက်နာခြင်းလိုက်နာမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။လိုက်နာမှုဖြေရှင်းချက်နည်းပညာများတယောပေါင်းစပ်နိုင်သောဗိသုကာအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်အကြောင်းအရာလုပ်ငန်းများအကြောင်းအရာ စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာအကြောင်းအရာတိုကင်များအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများအကြောင်းအရာဖန်တီးပါဖန်တီးမှုအသင်းများရေကာတာအေဂျင်စီများအတွက်ဆည်မိတ်ဖက်များအတွက် ဆည်ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက် ဆည်ဆည် vs cmsအကြောင်းအရာပို့ဆောင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ဖော်စီမံခန့်ခွဲမှုdropboxပထဝီဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုGoogle Drive ကိုဘဝသိပ္ပံအကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲmodular အကြောင်းအရာဗျူဟာMulti-ဘာသာစကားpersonalizationကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်ပြန်လာsharepointတိုကင်